IKhabhinethi yeBunker Hill epholileyo kwindawo ePhakamileyo kwiCTY
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTim
Ibekwe kwindawo eyedwa yendalo, ikhabhathi yethu ephezulu ibonelela ngombono onomtsalane kwenye yeendawo eziphakamileyo kuyo yonke iLa Crosse County. Ukuthomalalisa kubantu obathandayo, phumla nabahlobo, okanye ufumane inkuthazo kule khabhathi yobunewunewu ehlathini. Ikhabhinethi yaseBunker Hill ithiywe ngeBunker Hill Summit ekwiikhilomitha ezingamashumi amabini emazantsi ekhabhini. I-Bunker Hill ilala ezine kwaye ayitshayi. Yiza ujonge kwi-patio kwaye uphumle emlilweni. Zicwilise eluxolweni uze uhlale kuthi.
I-Bunker Hill yikhabhathi etofo-tofo ebekwe kumphezulu wenduli kwenye yezona ndawo ziphakamileyo kuyo yonke iLa Crosse County. Igcwele ngokupheleleyo, le ndawo yokurhoxa ibandakanya zonke izinto eziluncedo ngaphandle kwegrosari kunye nezinto zangasese. Sinikezela ngesixa esilinganiselweyo setyuwa, ipepile, khetha ikofu ye-Keurig, i-tinfoil, i-ziplock bags kunye ne-pam spray.
Siyayivumela inja enye eziphethe kakuhle eqeqeshwe kakuhle kule ndawo yokurhoxa. Sicela ukuba usazise ukuba uza kuzisa inja. Sikwacela ngobubele ukuba inja ingavunyelwa kwifenitshala, ingaphazamisi ezinye iindwendwe kwipropati, igcinwe ngokufanelekileyo, ifakwe kwi-kennel ukuba ishiywe ingajongwa, kwaye ingabotshwa ngaphandle. Intlawulo eyongezelelweyo inokuthi ingene kwiqondo elingaqhelekanga lokucoca kuquka inkunkuma okanye ukuchithwa kunye / okanye umonakalo. Akukho silwanyana sivumelekileyo ngaphandle kwezinja.
Le ndlwana ibekwe kumphezulu osecaleni osecaleni kunye netrafikhi encinci kakhulu. Yonwabela uxolo kunye nokubonelela ngendalo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho, nceda uqhagamshelane nam kwaye ndiza kukubuyisela ngokukhawuleza kuyo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo. Uyakonwabela ukurhoxa ngaphandle kokunxibelelana. Andihlali kwizakhiwo, kodwa ndingafumaneka ngokulula, ukuba kuyimfuneko.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho, nceda uqhagamshelane nam kwaye ndiza kukubuyisela ngokukhawuleza kuyo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalab…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mindoro